Wararka - Waa maxay duuban (RA) copper foil iyo sida ay u sameeyaan?
Waa maxay duuban (RA) naxaasta foil iyo sida loo sameeyo?
Duubtaybireed naxaas ah, bir bir ah oo qaabaysan oo wareegsan, ayaa la soo saaray oo ay soo saartay habka duubista, habka soo saariddeeda sida soo socota:
Gelida:Walxaha ceeriin waxaa lagu shubaa foorno dhalaalaysa si loogu tuuro maro qaabaysan tiir labajibbaaran.Habkani wuxuu go'aamiyaa walxaha alaabta ugu dambeysa.Marka laga hadlayo alaabada daawaha naxaasta ah, biraha kale marka laga reebo naxaasta ayaa lagu milmi doona habkan.
Qalafsan(Kulul)Wareegid:Xididdada waa la kululeeyaa oo lagu rogaa badeecad dhexdhexaad ah oo duuban.
Acid pickling:Badeecada dhexdhexaadka ah ka dib rogid qallafsan waxaa lagu nadiifiyaa xal aashito daciif ah si meesha looga saaro lakabka oksaydhka iyo wasakhda dusha sare ee alaabta.
Saxnaanta(qabow)Wareegid:Alaabta dhex dhexaadinta xariijimaha la nadiifiyay ayaa la sii rogaa ilaa laga soo rogo dhumucda ugu dambeysa ee loo baahan yahay.Sida maaddada naxaasta ah ee habka duubista, qalabkeeda adag ayaa noqon doona mid adag, maaddada aad u adag ayaa ku adkaan doonta duubista, markaa marka maaddadu gaadho meel adag, waxay noqon doontaa mid dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah si loo yareeyo qallafsanaanta walxaha, si loo fududeeyo duubista. .Isla mar ahaantaana, si looga fogaado duubista geeddi-socodka duubista ee dusha sare ee walxaha ay sababto qoto-dheeraanta qoto dheer, miraha-dhamaadka sare ayaa la dhex dhigi doonaa inta u dhaxaysa walxaha iyo duubabka filimka saliidda, ujeeddadu waa in la sameeyo. dusha sare ee wax soo saarka ugu dambeeya ayaa dhammayn kara.
Hoos u dhigista:Talaabadani waxay kaliya oo laga heli karaa alaabooyinka sare, ujeedadu waa in la nadiifiyo dufanka farsamada ee la keeno alaabta inta lagu jiro habka duubista.Nidaamka nadiifinta, daaweynta caabbinta oksaydhka ee heerkulka qolka (sidoo kale loo yaqaan daaweynta passivation) ayaa badanaa la sameeyaa, tusaale ahaan wakiilka passivation ayaa lagu dhejiyaa xalka nadiifinta si loo yareeyo oksaydhka iyo midabaynta foil naxaasta heerkulka qolka.
Xiritaanka:crystallization gudaha ee walxaha naxaasta by kululaynta heerkulka sare, sidaas hoos u engegnaantiisa.
Roughing(Ikhtiyaar): Dusha sare ee xaashida naxaasta ah waa la qallafsan yahay (sida caadiga ah budada naxaasta ah ama budada kobalt-nickel ayaa lagu buufiyaa dusha sare ee xaashida naxaasta ka dibna la daaweeyaa) si loo kordhiyo qallafsanaanta xaashida naxaasta (si loo xoojiyo xoogga diirka).Nidaamkan, dusha sare ee dhalaalaya ayaa sidoo kale lagu daaweeyaa daaweynta oksaydhka heerkulka sare (oo lagu dhejiyay lakabka birta) si loo kordhiyo awoodda walxaha si ay ugu shaqeyso heerkul sare iyada oo aan lahayn oksaydh iyo midab.
(Fiiro gaar ah: Habkan guud ahaan waxaa la sameeyaa kaliya marka ay jirto baahi loo qabo alaabtan)
Kala goyn:walxaha naxaasta duuban ee duuban waxaa loo qaybiyaa ballaca loo baahan yahay iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamilka.
Tijaabinaya:Iska yaree dhawr muunado oo duudduuban oo dhammaystiran oo loogu talagalay tijaabinta halabuurka, xoogga cufan, dhererka, dulqaadka, xoogga diirka, qallafsanaanta, dhammaystirka iyo shuruudaha macaamiisha si loo hubiyo in alaabtu u qalanto.
Baakad:Ku xidh badeecooyinka dhammayska tiran ee la kulma xeerarka qaybo ka mid ah sanduuqyo.
Waqtiga boostada: Jul-08-2021